သုံးရာသီ ခရီးသွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သုံးရာသီ ခရီးသွား	10
Posted by ဖိုးသာထူး on Jun 12, 2015 in Creative Writing, Travel | 10 comments
ဝေ့ဝဲ၍တိုက်ခတ်လာသောလေထဲတွင် ဖုန်နံ့လေးများသင်းနေသည် ။
နွေနေပူပူ ၊ မြေနီလမ်းဖုန်ထူထူတွင် မြင်းလှည်းလေးတစ်စီး မောင်းလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည် ။
သြော် …… ပုဂံရှေးဟောင်းနယ်မြေတွင် မြင်းလှည်း ရှိနေသေးသည်ပေါ့ ။
တချိန်က မြင်းလှည်းလေးများစီး၍ ပုဂံဘုရားများကိုလိုက်လံဖူးမျှော်ခဲ့ဖူးသည် ။
ထန်းပင်ထန်းတောများကြားမှ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ရင်း နွေပန်းချီကို ငေးခဲ့ဖူးသည် ။ ရေဆာဆာနှင့် ပင်ကျရည်ချိုချိုလေးများကို အမှတ်ရမိပြန်သည် ။ ယခုသော် …… ထိုထန်းတောတို့ မရှိတော့ပြီ ။ ကတ္တရာခင်းသော လမ်းသစ်ကြီးများ ၊ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်လာသော်လည်း ရှေးဟောင်းနယ်မြေ၏အထိ အတွေ့ကိုကား ပြည့်စုံစွာမရတာ့ပါ ။
မော်ဒန် ပုဂံဖြစ်လို့နေလေပြီ ။ သစ်လွင်သောဆေးရောင်များနှင့် ပြန်လည်တည်ထားသောဘုရားများကိုကြည့်ရင်း တချိန်က အိုမင်းဆွေးမြေ့နေသောအုပ်ပုံအုပ်ရိုးများဖြင့်ချယ်သသော ပုဂံကိုလွမ်းမိလေသည် ။
အဟောင်းကိုသာကြိုက်တတ်သူမဟုတ်ပါ ။ သို့သော် ရာဇဝင်နှင့် သမိုင်းနောက်ခံတွေကိုတော့ အသစ်မစီရင်စေလိုပါ ။
ပြိုပျက်နေသောစေတီဂူဘုရားတစ်ဆူ၏ အသွင်အပြင်ကို စိတ်ကူးဖြင့်သာ ပုံဖေါ်ချင်မိသည် ။ယခုကဲ့သို့ မတူခြားနားသောခေတ် ကာလ မှ လက်ရာအသီးသီးကို တစ်ပုံစံတည်းပုံစံထုတ်ပြုပြင်လိုက်သည်မှာ ဇတ်ပွဲတွင်သုံးသောနောက်ခံပန်းချီပိတ်ကားကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည် ။
ထိုခေတ် ထိုအခါက အလွန်လက်ရာမြောက်သော ရုပ်ကြွ ၊ ပန်းကနုတ်တို့သည် ပညာရှင်များမတူခြားနားသည်နှင့်အညီ ကွဲပြားပါလိမ့်မည် ။
တည်ထားကိုးကွယ်သော ဒါယကာအသီးသီး၏ နောက်ခံပုံဝတ္ထုများအလိုက် စေတီပုထိုးပုံစံ ၊ နံရံဆေးရေးနှင့် ပန်းကနုတ် ၊ ဂူဘုရားအတွင်း လှိုင်ခေါင်းပုံစံ ၊ အုပ်စီအုပ်ညှပ်ပုံစံ စသည်တို့ ကွဲပြားနေမည်ဖြစ်သည် ။
ထိုထိုသော မတူခြားနားသည့် အနုပညာလက်ရာများစွာနှင့် ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုင်ရာ သမိုင်းအထောက်အထားတို့သည်လည်း
ခေတ်ကြေးမုံကို ဖေါ်ဆောင်ကြပေလိမ့်မည် ။
“” ဤသည်ရွှေမြို့ ၊ ဤသို့စေတီ ၊ ဤသည်ရွှေနန်း ……… “” အမတ်ကြီးလက်ဝဲသုန္ဓရကဲ့သို့ စိတ်မှန်းဖြင့် လွမ်းလိုပါသော်လည်း ၂၁ ရာစု ပုဂံမြို့ဟောင်းထဲဝယ် ရှေးမူမပျက်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟုဆိုသော ဘုရားပရဝုဏ်အတွင်း ဝမ်းသာရမလိုလို ဝမ်းနဲရမလိုလို ။
အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်တစ်ခုထဲဝင်ပြီး ကြေးညှိတက်နေသော ရုပ်တုတစ်ခုကို ဈေးမေးကြည့်သည် ။ ရှည်လျားစွာသော ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို ဈေးသည်မှပြောပြပြီးလျှင်
အမှန်တကယ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအစစ်ဖြစ်နေပါက ဈေးအလွန်ချိုနေမည်ဟု ထင်မိသည် ။
လိုက်လံပို့ဆောင်သော ဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်လေးမှာ ပြုံးစိစိဖြင့် ကြည့်နေကြောင်းသတိထားမိလိုက်သည် ။
ဈေးဆိုင်နှင့် ခတ်လှမ်းလှမ်းသို့ရောက်သော် “” အဲ့ဒီအရုပ်မျိုးတွေလိုချင်ရင် မြို့သစ်ပန်းပုဆိုင်မှာ ဈေးသက်သာတယ်အစ်ကို “”
“ရန်ကုန်က ဆိုင်တွေမှာပြန်ရောင်းဖို့ အဲ့ဒီလက္ကားဆိုင်တွေကဘဲမှာကြတာ “”
ဟောင်းချင်ယောင်ဆောင်နေသော အသစ်တို့သည် မော်ဒန်ပုဂံတွင် ဂန္ထဝင်မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားကြလေပြီ ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … ပုဂံသည်ကား ကျနော်တို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် နေရာတစ်ခု စိုးမိုးထားနေသည်မှာမငြင်းသာ ။
ဟောင်းသည်ဖြစ်စေ သစ်လွင်နေသည်ဖြစ်စေ ပုဂံမြေ၏ထွေးပွေ့ခြင်းကိုတော့ ခံယူချင်မိသည် ။
မြန်မာပြည်၏ အပန်းပြေ ခရီးသွားစရာနေရာများတွင် ပုဂံသည် ရာသီမရွေး သွားလာလို့ အဆင်ပြေလေသည် ။
သဘာဝ၏နောက်ခံရှုခင်းသည် ရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သော်ငြား ပုဂံမြေကို နင်းလိုက်သည်နှင့် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ
အနုသုခုမ လက်ရာတို့ကား ရာသီဥတုဒဏ် ၊ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ် နှင့်တကွ ခေတ်အဆက်ဆက် အသစ်ပြုလုပ်မှုဒဏ်များကိုခံယူရင်း အတော်အတန် ကျန်ရှိနေသေးသည်ကိုတော့ မြင်ရပါဦးမည် ။
အဆောက်အဦး စေတီပုထိုးအများစုမှာ ကုလားကျောင်းခံ ဂူဘုရားများအသွင် ရှိကြသည် ။
မစ္ဇျိမဒေသ၏ ဟန်အမူအယာများနှင့် ပျူ ၊ သရေခေတ္တရာနှောင်းပိုင်းဟန် စေတီတချို့ကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည် ။
စေတီ ဆိုသည်မှာ စေတိယဟူသော သက္ကတဘာသာမှ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အညီ အစုအပုံဟူသည့် သဘောအထိန်းအမှတ်ဖြစ်လေသောကြောင့် ခေတ်ကာလအလိုက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုလည်းအထူးထင်ဟတ်စေသည်မှာမလွဲပေ ။
ဗုဒ္ဓဂယာရှိ ပုထိုးတော်ကြီးတည်ထားဟန်နှင့် နှီးနွယ်သော သရေခေတ္တရာခေတ် ဘောဘောကြီးစေတီ(ပြည်မြို့) ၊ ပုဂံခေတ်ဦးပိုင်းလက်ရာ ဗူးဘုရားစေတီနှင့် လောကနန္ဒာ စေတီတို့မှာ ပြောင်းတိုင်မတ်မတ်အသွင်ဖြင့် မူဟန်ကွဲလေသည် ။
အထူးသဖြင့် စေတီဂူဘုရားများအတွင်းမှဆေးရေးသရုပ်ဖေါ်များ နှင့် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများသည် ထိုခေတ်၏ ယုံကြည်မှုနှင့် အလှူရှင်၏
အဇ္ဇတ္တသဏ္ဍန်ကို ဖေါ်ပြနေသည့်အလား ထင်မှတ်မိသည် ။
ဤနယ်မြေ ဤဒေသတွင် များပြားလှစွာသော စေတီပုထိုးများရှိနေခြင်းသည်ကား ထိုခေတ်အခါ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအံ့သြစရာပင်ဖြစ်လေ၏ ။
ယခုချိန်တွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနဌါနမှ စာရင်းအရ ဘုရားပေါင်း လေးထောင်ကျော်ရှိနေသေးသည်ဖြစ်ရာ တစ်ချိန်ကပုဂံအင်ပါယာကြီးအား စိတ်မှန်းဖြင့်ပင် အားရကျေနပ်၍ မဆုံးနိုင်ဖြစ်မိပြန်တော့သည် ။
အကယ်၍သာ သုံးရက်တာခရီးတစ်ခုခု ထွက်မည်ဆိုပါလျှင် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သော နေရာများတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သည့် ပုဂံမြေအား တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက် ရောက်စေချင်မိပါသည် ဟု ……………
ကြည်ဆောင်း says: ပုဂံ ပုဂံ ပုဂံ
2 ခေါက်ရောက်ဘူးတာတောင် အထပ်ထပ်သွားချင်နေသေးတဲ့ ပုဂံ
မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့ သူတိုင်းကိုရောက်စေချင်တဲ့ ပုဂံ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟောင်းထဲမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး နေရာ။
တောင်ပေါ်သား says: ၂၀၀၈ တုန်းက ကုမ္ပဏီနဲ့အတူရောက်သေးတယ် ၊
အံ့သြစရာ တန်ဘိုးကြီးဒေသပါပဲလေ ၊
မြစပဲရိုး says: . ကျွန်မ ဒီတစ်ခါ ရွှေပြည်က ပြန်ထွက်ချိန် လေဆိပ်ကော်ဖီဆိုင်ထဲ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက် နဲ့ စကားလက်စုံကျလိုက်မိတယ်။
သူက ပုဂံ နဲ့ အင်းလေး က ပြန်လာတာတဲ့။
ပုဂံ က သူ့ကို တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်လိုက်တယ် ထင်ရဲ့။
နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဦးမယ်။ အဲဒီမှာ ကြာကြာနေဖို့ ကြိုးစားမယ်တဲ့။
အဲဒီလို နိုင်ငံခြားသား တိုးရစ် တွေများလေ ကိုယ့် ဒေသခံ တွေ ကို ရိုးသား ကြိုးစား ပြီး စိတ် အေးချမ်းတဲ့ လူတွေလို့ မြင်စေချင်စိတ် ပိုလာလေဘဲ။
ဒါပေမဲ့ တနပ်စား အတွက် ရုန်းနေရတဲ့ ဘဝ တွေ ကို ဘယ်လို လုပ်ပြီး ရိုးသားကြ လို့ ပြောနိုင်ပါ့မလဲ။
ထိပ်က တောင် ခေါင်မလုံ တာ ကမ္ဘာကျော် နေတာ ကို။
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ထဲ ကောင်းတဲ့ အဟောင်း တွေ အများကြီးပါ။
ပင်လယ်ကမ်း ရှိတယ်၊ တောတောင် ရှိတယ်၊ ပုဂံလို သမိုင်းဝင် နေရာ ရှိတယ်။
ဒါတွေကို မြှင့်ပေးဖို့. ဖော်ထုတ်ဖို့ စေတနာလဲ မရှိ၊ ပညာလဲ မဲ့ နေလို့ မဟုတ်ရင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ အလှဆုံးလို့ ဂုဏ်ယူလို့ ရတယ်။
ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး တစ်ခါက ပုဂံခရီး ဒဏ္ဍာရီ လေး တစ်ခု ကို လွမ်းသွားပါတယ် ကဆာမိ။ :-)))
လုံမလေးမွန်မွန် says: Tourist destination တွေထဲမယ်.. ပုဂံသူ ပုဂံသားတွေက နာမည်ကြီးတယ် အရီးရဲ့… မရိုးသားကြတာတဲ့နေရာမှာ… လိုချင်စိတ်များတဲ့နေရာမှာ.. ပုဂံက tourists ကိုပဲ အဓိက မှီခိုနေရတာဆိုတော့.. impact တွေက သိပ်များတယ်… အဓိကက စိတ်ဓာတ်တွေ ပျက်စီးနေကြပြီ… ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်…
manawphyulay says: ပုဂံ… အားလုံးရဲ့ပုဂံ… မရိုးနိုင်တဲ့ပုဂံ
သွားပြီးတိုင်း ထပ်ထပ်သွားချင်မိတဲ့ ပုဂံ
ဘယ်တော့မှ သွားဖို့ မမုန်းခဲ့တဲ့ ပုဂံ..
ခုတော့ ခရီးထွက်ခြင်းကို ခဏရပ်ထားရဦးမှာပေါ့လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ဦးကြောင်ကြီး says: ပုဂံမှာ ဘုရားတည် များလွန်းလို့ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲပါတယ် ပြောဒဲ့ တဖက်ပိတ်တွေ ရွာထဲ ရှိသဗျ။ ပညတ်အရာတွေသည် အမြဲအမှန် အမှားမရှိ။ ကာလံဒေသံလိုက်လို့ အပြောင်းအလဲရှိတာ ဒင်းတို့ နားမလည်..။ တည့်တည့်ပြောလျင် အနော့် ရောက်ခမ မာမွတ်ခိုင် ရှေ့စုန်းဂ။ ခီမြှာတို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်တဲ့ ပုဂံဘုရားနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးက ယနေ့ တိုးရစ်ဇင်ခေတ်မှာ ဒေါ်လာသန်းရာချီ ရှာပေးနေပြီ မဟုတ်လား။ ရှေ့ရှောက်လည်း ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီ ရှာပေးအူးမည်… အဲ စစ်တပ် အာဏာ ဆက်ဖက်မတွယ်ထားလျင်ပေါ့စ်…။ ငါကွ…..
Ma Ei says: ပုဂံ ကို သုံးရာသီလုံးရောက်ဖူးတယ်…
မိုးကုန် ဆောင်းဦး စက်တင်ဘာ ဆန်းဆက် အလှဆုံး…
ပုဂံ ပုပ္ဖါး နဲ့အတူ ပခုက္ကူ ကိုလဲ တစ်ဆက်တည်းသွားလို့ရနေပီ…
ပြန်ခဲ့တာ မကြာသေးပေမယ့် ခုနေလိုက်ပို့မယ်ဆို လိုက်ဦးမှာ…
Mike says: .လွမ်းမိပါသည်ပုဂံပြည်ပေါ့ ကဆာမိ
.အဟောင်း..အဟောင်းတို့ရဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့တန်ဖိုးနားမလည်တဲ့ စစ်အစိုးရ
အောင် မိုးသူ says: အားလုံးရဲ့ ပုဂံ